/g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); }); လင္းဦး(စိတ္ပညာ) _ Lin Oo: US ေလယာဉ် ပျက်ကျြပီး ၅ မိနစ်အတွင်း ခရီးသည်အားလံုးအား ကယ်တင်နိုင်ခဲ့
US ေလယာဉ် ပျက်ကျြပီး ၅ မိနစ်အတွင်း ခရီးသည်အားလံုးအား ကယ်တင်နိုင်ခဲ့
အေမရိကန်နိုင်ငံ ၊ နယူးေယာက်ြမို့ရိှ ေရခဲတမှျ ေအးစက်ေနသည့် ဟတ်ဆန်ြမစ်အတွင်းသို့ ေလယာဉ်ပျက်ကျြပီးေနာက် ေလယာဉ်ေပါ်ပါ ခရီးသည် (၁၅၅)ေယာက်စလံုးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ခရီးသည်တစ်ေယာက်မှာ ေြခနှစ်ေချာင်းကျိုးသွားြပီး အြခားခရီးသည်များ ြပင်းထန်စွာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ြခင်း မရိှဟု ဆိုပါသည်။
၁၅-၁-၂၀၀၈ (ြကာသာပေတးေန့)တွင် အေမရိကန် ေလေြကာင်း ဂျက်ေလယာဉ်သည် ဟတ်ဆန်းြမစ်ေပါ်သို့ အေရးေပါ်ဆင်းသက်ခဲ့ြပီးေနာက် ဖယ်ရီသေဘင်္ာ များ၊ အငှားေရယာဉ်များနှင့် အြခားေရယာဉ်များက ေလယာဉ်အမှုထမ်းနှင့် ခရီးသည် (၁၅၅)ေယာက်စလံုးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ြကပါသည်။ (၅)မိနစ်အတွင်း ေလယာဉ်ေတာင်ပံ(၂)ဖက်စလံုးေပါ်ရိှ တုန်ခိုက်ေနေသာ ခရီးသည်များကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ေလယာဉ်အမျိုးအစားမှာ Airbus A 320 ြဖစ်ြပီး ေလယာဉ်စက်ရပ်ြပီး ေရခဲတမှျေအးေနေသာ ြမစ်ထဲသို့ ေလှျာထိုးဆင်းခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ေလယာဉ်ခရီးစဉ်အမှတ် 1549 ြဖင့် ေဖာ်ြပပါ Airbus A 320 သည် LaGuardia ေလဆိပ်မှ Charlotte ြမို့သို့ စတင်ပျံသန်းစဉ် ကေနဒါငန်းအုပ်စုနှင့်တိုက်မိြပီး အင်ဂျင်များအတွင်းသို့ ငှက်အချို့ စုတ်ယူြခင်းခံရြပီး ေနာက် ယခုကဲ့သို့ ြဖစ်ပွားြခင်းြဖစ်သည်ဟု ြပည်ေထာင်စုအရာရိှများက ေြပာပါသည်။ အဆိုပါ ေလယာဉ်မှာ ေဂျာ့၀ါရှင်တန်တံတားအနီးသို့ ထိုးဆင်းလာြပီးေနာက် မန်ေဟတန်ရပ်ကွက်အစပ်တစ်ေလှျာက် ေရြပင်တွင် ရှပ်ေြပးဆင်းခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ေရြပင်သို့ အင်အားြပည့် ရိုက်ခတ်မိြပီးေနာက် ေလယာဉ်မှာ ရပ်တန့်သွား ခဲ့သည်ဟု Good Morning America စာေစာင်မှ အမျိုးသမီးြဖစ်သူ Ms. Robin Roberts က ၎င်း၏ အိမ်ခန်း ြပတင်းေပါက်မှ ြမင်ေတွ့ခဲ့သမှျကို ABC သတင်းဌာနသို့ ေြပာြကားခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ေလယာဉ်သည် ေရြပင်ေပါ်သို့ အင်အားြပည့်ရိုက်ခတ်မိေသာ်လည်း ပံုမပျက်ရပ်တန့်သွားခဲ့၍ ေလယာဉ်ေတာင်ပံေပါ်သို့ ခရီးသည်များ လမ်းေလှျာက်ထွက်နိုင်ခဲ့ြပီး ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အချို့မှာ ြမစ်အတွင်းသို့ ြပုတ်ကျခဲ့မှုများ ရိှခဲ့ပါသည်။
Gov. Thomas H.Kean အမည်ရိှ ဖယ်ရီေရယာဉ်မှ သေဘင်္ာသား Mr. Cosmo Mezzina က ယခုကဲ့သို့ ခိုက်ခိုက်တုန်ေနေသာ ခရီးသည်များကို မြမင်ေတွ့ခဲ့ဖူးပါေြကာင်း၊ ၎င်းက လူငယ်တစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်ခဲ့ြပီး ၎င်း၏ ကုတ်အကင်္ျ ီကို ချွတ်၍ တုန်ခိုက်ေနေသာလူငယ်ကို ေနွးေထွးေအာင် ြပုလုပ်ေပးခဲ့ ရေြကာင်း ဆိုပါသည်။
ခရီးသည်တစ်ဦးမှာ ေြခနှစ်ေချာင်းကျိုးသွားသည့်အတွက် ေဆးရံုသို့ပို့လိုက်ရေြကာင်းြဖင့် Associated Press သတင်းစာက သတင်းပို့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဒဏ်ရာအြပင်းအထန်ရရိှသူများ မရိှဟု ဆိုပါသည်။
ခရီးသည်များမှာ ေလယာဉ်ေပါ်တွင် အေရးေပါ်ေရြပင်သို့ ဆင်းသက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပံုမှန် သရုပ်ြပမှုကို ြမင်ေတွ့ခဲ့ေသာ်လည်း ယခုလို ေရြပင်တွင် ေလယာဉ်ပျက်ကျရာ၌ ပံုမပျက်ဆင်းသက်နိုင်မှုမှာ အလွန်ပင် ရှားပါးသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလတွင် Air Florida ဂျက်ေလယာဉ်သည် ၀ါရှင်တန်ြမို့ရိှ တံတားတစ်ခုကို တိုက်ခိုက်မိြပီး ပိုတိုမက်ြမစ်အတွင်းသို့ ပျက်ကျခဲ့ရာ ေလယာဉ်ေပါ်ပါရိှသည့် ခရီးသည် (၇၉)ဦးအနက် (၅)ဦးသာ အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့ပါသည်။
ယခုပျက်ကျသည့်ေလယာဉ်ကို ေမာင်းသည့် ေလယာဉ်မှူးသည် Mr. Chesley B. " Sully" Sullenberger III ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းမှာ ကာလီဖိုးနီးယားြပည်နယ် ၊ ဒန်ဗီြမို့မှ တိုက်ေလယာဉ်မှူးေဟာင်း တစ်ေယာက်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ယံုြကည်အားကိုးေလာက်ေသာ အသက်အန္တရာယ်ကင်းေရး နည်းလမ်း များ သင်ြကားသည့်ေကျာင်း (Safety Reliability Methods Inc) ကို တည်ေထာင်ခဲ့သူ ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ ေကျာင်းမှာ အဆင့်ြမင့် အသက်အန္တရာယ်ကင်းေရးစနစ်အသံုးြပုမှုများကို သင်ြကားြပီး အချို့စနစ်များသည် ေလယာဉ်တင်သေဘင်္ာရိှ ပျံသန်းေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၏ အြမင့်မားဆံုး စွန့်စားနိုင်မှုေဆာင်ရွက်ချက်များ အေပါ် အေြခခံသည်ဟု ၎င်း၏ Website က ဆိုပါသည်။
နယူးေယာက်ြမို့ေတာ်၀န် Mr. Michael R. Bloomberg က အဆိုပါ ေလယာဉ်မှူးသည် အံ့ဩစရာ ေကာင်းေလာက်သည့် အလုပ်တစ်ခုကို ထမ်းေဆာင်နိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ အမျိုးသားပို့ေဆာင်ေရး လံုြခံုမှုဘုတ်အဖွဲ့မှ စံုစမ်းစစ်ေဆးသူများနှင့် စကားေြပာခဲ့သည့် Mr. Bloomberg က ေလယာဉ်မှူး Mr. Sullenberger ကို စကားေြပာခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့ရာတွင် အများြပည်သူများသိရိှရန် ေြကညာချက် ထုတ်ြပန်ခဲ့ြခင်းမရိှဟု ဆိုပါသည်။ Mr. Bloomberg က ေလယာဉ်မှူး Mr .Sullenberger သည် ၎င်းအေနြဖင့် ေလယာဉ်မှာ ေနာက်ဆံုးမစွန့်ခွာမီ ေလယာဉ်ေပါ်ပါ ခရီးသည်များအားလံုး ပါရိှရန်အတွက် ကျန်ခဲ့ြခင်း မရိှရေလေအာင် ေလယာဉ်အတွင်း ေခါက်တုန့် ေခါက်ြပန် ရှာေဖွေပးခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ေလယာဉ်ထိုးဆင်ခဲ့မှုနှင့် ကယ်ဆယ်မှုသည် ကျွမ်းကျင်မှုအေပါ်တွင် မူတည်သည်ဟု ဆိုေသာ်လည်း ကံ၏ အကျိုးခံစားခွင့်ကို ရရိှခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ေလယာဉ်ထိုးဆင်းခဲ့သည့်အချိန်သည် ညေန ၃း၃၀ မတိုင်မီြဖစ်ြပီး ဟတ်ဆန်ြမစ်နှစ်ဖက်ရိှ ဖယ်ရီေရယာဉ်များ ခရီးသည်များကို ပို့ေဆာင်ေပးသည့် အလုပ် အများဆံုးအချိန်လည်း ြဖစ်ပါသည်။ ထုိအေြခအေနသည် ပျက်ကျသည့် ေလယာဉ်ဆီသို့ ချက်ြခင်းေရာက် နိုင်ေအာင် အေြခအေနေပးေနသကဲ့သို့ ရိှပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကမ္ဘာေပါ်တွင် ေရလမ်းအရှုပ်ဆံုးြဖစ်သည့် ဟတ်ဆန်ြမစ်တွင် မြကာခဏ ဖယ်ရီေရယာဉ်များ၊ ကုန်တွဲသေဘင်္ာများ၊ ကုန်တင်သေဘင်္ာြကီးများနှင့် ခရီးသည်ပို့ေဆာင်ေရးေရယာဉ်များြဖင့် စုပံုေနေလ့ရိှေသာ်လည်း ေလယာဉ်ထိုးဆင်းသည့်အချိန်၌ မည်သည့် ေရယာဉ်ကိုမှျ ထိခိုက်မှုမရိှေအာင် ေရလမ်းရှင်းလျက် ရိှပါသည်။
ေဖာ်ြပပါ ေလယာဉ် Airbus A 320 သည် LaGuardia မှ ညေန ၃ း၂၆ နာရီတွင် ထွက်ခွာပျံသန်း ခဲ့ြပီးေနာက် ဘယ်ဘက်သို့ ချိုး၍ ဟတ်ဆန်ရိှရာအေနာက်ဖက်သို့ ပျံသန်းခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ြပည်ေထာင်စုေလေြကာင်း ပျံသန်းအုပ်ချုပ်ေရးဌာနအေနြဖင့် ယခုအြဖစ်အပျက်ကို စံုစမ်းစစ်ေဆးမှု များ ြပုလုပ်ေနပါသည်။ သီအိုရီတစ်ခုမှာ ေလယာဉ်သည် ပျံသန်းေနသည့် ငန်းအုပ်တစ်အုပ်ကို တိုက်မိခဲ့သည် ဟူေသာ အဆိုြဖစ်ပါသည်။ ပို့ေဆာင်ေရးအတွင်း၀န် Ms. Mary E. Peters က ယခု အြဖစ်အပျက်မှာ နယူးေယာက်နယ်ေြမမှတဆင့် ပျံသန်းလာေသာ ကေနဒါငန်းအုပ်စုေြကာင့်ြဖစ်ြပီး ေလယာဉ်အင်ဂျင် (၂)ခုစလံုးကို တိုက်မိခဲ့ြခင်း ြဖစ်နိုင်သည်ဟု မိမိကို ေြပာြကားေြကာင်းြဖင့် လွှတ်ေတာ်အမတ် Mr. Charles E. Schumer က ဆိုပါသည်။
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလေြကာင်း ေလယာဉ်မှူးများအသင်း၏ အမှုေဆာင် ေလေြကာင်းလံုြခံုေရး ဥက္ကဌ Mr. Rory Kay က ေလယာဉ်မှူးများေခါ်သည့် ငှက်မျိုချမှု (Bird Ingestion) အြဖစ်အပျက်သည် ေလယာဉ် အင်ဂျင်ကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ရပ်တန့်ေစနိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ အကယ်၍ ငှက်များသည် ေလယာဉ် အင်ဂျင်တစ်ခု၏ စုပ်ယူမှုကို ခံရပါက ေလယာဉ်မှူးအေနြဖင့် အနီးဆံုးေလယာဉ်ကွင်း (သို့မဟုတ်) ေလဆိပ်သို့ ဆင်းသက်နိုင်ရန်သာ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
Ms. Kay မှ ဆက်လက်ေြပာြကားရာ၌ ကျန်အင်ဂျင်တစ်လံုးမှာ အသံုးြပု၍ရပါက ကံေကာင်းနိုင်ေသာ အေြခအေနတွင်ရိှသည်ဟု ဆိုရမည်ြဖစ်ြပီး အင်ဂျင်(၂)လံုးစလံုး ထိပါက ဆံုးြဖတ်ချက်အချို့ကို လျင်ြမန်စွာ ချရန်လိုအပ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ယခုလို အင်ဂျင်(၂)လံုးစလံုးအား ငှက်များ၀င်ေရာက်တိုက်ခိုက်မှုသည် အလွန်ရှားေသာ အြဖစ်အပျက် မျိုး ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ေလယာဉ်၏ အင်ဂျင်ပါ၀ါများ ဆံုးရံှုးသည်ဟု တိကျရှင်းလင်းစွာ မသိရေသးေြကာင်း၊ သို့ရာတွင် အဆိုပါေလယာဉ်ြဖတ်ပျံသည့် Bronx ြမို့ရိှ အထက်တန်းသိပ္ပံေကျာင်းမှ ေကျာင်းသားတစ်ဦးြဖစ်သူ Mr. Nick Reade က မိမိတို့ြကီးမားသည့် တိုက်မိသံြကားရ၍ ေမာ့ြကည့်ရာ ေလယာဉ်တစ်စီးကို ေတွ့ရေြကာင်း၊ ေလယာဉ်မှာ ပတ်ချာလည်ြဖစ်ေနြပီး ဘယ်ဘက်အင်ဂျင်မှ မီးစများေတွ့ခဲ့ရေြကာင်းနှင့် ေလယာဉ်မှာ အေနာက်ေတာင်ဘက်သို့ လှည့်သွားသည်ကို ြမင်လိုက်ေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။ ၎င်းဦးတည်သွားသည့် ဘက်သည် ဟတ်ဆန်ြမစ် ြဖစ်ပါသည်။
လူမှုေရးအလုပ်သမားြဖစ်သူ ၃၅နှစ်အရွယ်ရိှ Mr. Patrick Wilder သည် ၁၂၅လမ်း အနီး ၊ ဟတ်ဆန်ြမစ်တေလှျာက် ေြမာက်ဖက်သို့ စက်ဘီးြဖင့်သွားစဉ် ေဂျာ့၀ါရှင်တန်တံတားကို အဆိုပါေလယာဉ် ြဖတ်ေကျာ်သွားသည်ကို ေတွ့ရေြကာင်းနှင့် ေလယာဉ်မှာ ပံုမှန်လမ်းေြကာင်းမှ မပျံသည်ကို သိရ၍ ေလယာဉ် တစ်ခုခုြဖစ်ေနသည်ဟု သိလိုက်ေြကာင်း၊ ေလယာဉ်မှာ အနည်းငယ်ဆွဲလျက်ရိှြပီး ေလယာဉ်မှာ ထိုးကျသွား၍ ေရြပင်နှင့်တိုက်မိသံကို ြကားလိုက်ရေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။ ေလယာဉ်မှာ ပျံတက်ြပီး (၃)မိနစ်အြကာ ထိုးကျခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ေလယာဉ်ခရီးသည်ြဖစ်သူ ကွန်နက်တီးကပ်ြပည်နယ်၊ ေနာေ၀ါ့ြမို့မှ Mr. Jeff Kolodjay က AP သတင်းဌာနကို ေြပာြကားရာ၌ မိမိအေနြဖင့် ေလယာဉ်တက်ြပီး (၂)မိနစ် သို့မဟုတ် (၃)မိနစ်ခန့်တွင် ကျယ်ေလာင်ေသာအသံကို ြကားရေြကာင်း၊ ဘယ်ဘက်သို့လှည့်ြကည့်လိုက်ရာ အင်ဂျင်တစ််ခုမှာ မီးစတင် ေလာင်ေနသည်ကို ေတွ့ရေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။
ေလယာဉ်သည် ေရြပင်ေပါ်သို့ ထုိးကျြပီးေနာက် ဖယ်ရီေရယာဉ်များနှင့် အြခားေရယာဉ်များ ချက်ြခင်း ေရာက်ရိှလာပါသည်။ ပထမဦးဆံုး ဖယ်ရီြဖစ်သည့် Thomas Jefferson သည် ခရီးသည် (၅၆)ဦးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အသက်ကယ်ေဖာင်ေပါ်တွင် ပါရိှသည့် ခေလးငယ်နှင့် အမျိုးသမီးကိုလည်း ကယ်ဆယ်နိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ပထမပိုင်းတွင် မိခင်က ခေလးကိုေပးရန် ြငင်းဆန်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ေလယာဉ်ေတာင်ပံများသည် ခရီးသည်များတန်းစီ၍ ကယ်ဆယ်ေရးယာဉ်ေပါ်သို့ တိုက်ရိုက်တက်နိုင် ေအာင် ေရြပင်တွင် ေပါ်ေနပါသည်။ သို့ရာတွင် အချို့ခရီးသည်များမှာ ေရယာဉ်များအနီးသို့ ေရာက်ရန် အတွက် ေရထဲသို့ ခုန်ချခဲ့ြကပါသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာ ေလယာဉ်အနီးတွင် ေမျာေနသည့်အတွက် ေရထဲသို့ဆင်း၍ ကယ်တင်ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုပါသည်။
နယူးေယာက် ရဲဌာန ေရငုတ်သမားြဖစ်သူ Mr. Michael Delancy က ေြပာြကားရာ၌ ၎င်းအေနြဖင့် ေလယာဉ်အတွင်းသို့ ေရာက်ရိှရာတွင် ေရများသည် ထိုင်ခံု၏ ေခါင်းမှီေနရာသို့ ေရာက်ေနြပီး ခရီးသည်များ ကျန်ရိှြခင်း မရိှေစရန် ရှာေဖွခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ေလယာဉ်မှာ ေရြပင်နှင့်ထိေတွ့ြပီးေနာက် တစ်နာရီခန့်ေပါ်ေနြပီး ၎င်းေလယာဉ်ကို ြပန်လည်၍ ေရေပါ်တွင် ေပါ်ရန်ြပုလုပ်ြပီး မန်ေဟတန်သေဘင်္ာကျင်းဆီသို့ သယ်ေဆာင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
နယူးေယာက်ရဲမင်းြကီးြဖစ်သူ Mr. Raymond Kelly က ေလယာဉ်သည် ေရနှင့်ထိြပီးေနာက် (၅)မိနစ်အတွင်း ခရီးသည်အားလံုးကို ေရယာဉ်များေပါ်သို့ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ေြကာင်းြဖင့် ခန့်မှန်းေြပာြကား ပါသည်။
Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Saturday, January 17, 2009
January 17, 2009 at 7:03:00 PM GMT+6:30